Iyo misiyano 'vanoramba mamiriro ekunze' inosanganiswa nefungidziro dzekupangana, vezvematongerwo enyika-yemapapiro uye kunzwa kwematumbu: Martin Vrijland
'Kusarudzika kwemamiriro ekunze' kwakabatana nefungidziro dzekupangana, vezvematongerwo enyika mapapiro uye manzwa
Akaiswa mukati Kuparadza Kupandukira, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 1 October 2019	• 15 Comments
Iyo 'yekudziya kwepasirese' inyaya yakanyatsogadzirwa yakagadzirwa umo mapato ese ezvematongerwo enyika, vezvenhau nevanhu vane mukurumbira vanoita basa rinotungamira. Hazvigone kurambwa kuti vezvenhau uye vezvematongerwo enyika vakabatanidza bato rezvematongerwo enyika rakabatana nevanozvidza 'vanoramba' uye kurangana kwevateveri vekurangana. Isu tinodaidza kuti 'kuvaka rudzi' kana 'kukwirira'. Ichi chiitiko chekushambadzira chakanyatsotambwa uye pasi rose chinotamba.
Rudyi (Chirungu: 'kurudyi-bapiro') raibvumidzwa kukura mukutsigira uye 'kurudyi-bapiro' raifanira kubatanidzwa kune mashoma anodzokorodza stigmas. Boka 'rerudyi-bapiro' rinosemeswa ku: nationalist (anti-globalization), mukadzi asina hushamwari, anofungidzira, kuramba kudziya kwepasi ("vanoramba") uye kuomerera pakurangana dzidziso. Iyo yekupedzisira yakakwanisika kuburikidza nekukura kwedzimwe nzira dzenhau dzakadai saFowowars (Alex Jones), David Icke uye muNetherlands vanhu vakaita saThierry Baudet naRobert Jensen. Nhepfenyuro idzodzo dzakasarudzika dzakashatirwa munzvimbo dzekudyidzana uye nekuvarega vachivhenekera rutsigiro rwakavhurika uye nerunyararo rwekudyidzana kwaTrump uye kurwisa kushamwaridzana nehurongwa hweBrexit, wapedza kuvaka nekuchenjera kwemhando yepasirose yemapapiro. Chinhu chete chaunongofanira kuita kupurudza chinyorwa icho, semuenzaniso, dambudziko rehupfumi uye iwe unobhadharira zvese zvinoenderana neiyo brand mune kamwechete.
Kubudikidza naGreta Thunberg nemarudzi ese emhemberero, masasi ari kuridzwa panzwimbo inowanikwa nyore nyore. Vazhinji vanhu vanongori simbe zvakanyanya kana kuti vakabatikana zvakanyanya ne 'group think' yekudzidza mharidzo dzakaita sedziri pasi apa. "Kuona firimu kwemaawa maviri? Handiite izvozvo. Wese munhu anogona kunhuhwirira kuti nharaunda iri kuparadzwa uye kuti pasi riri kudziya". Hapana munhu anogona kuramba kuti nharaunda iri kuparadzwa ne, semuenzaniso, mapurasitiki ari mumvura, asi munhu anonyomba 'anoramba' anonamatira pazvinhu zvese uye munhu wese anotora dambudziko kutarira kupfuura nhamba pre-kubiridzwa neyezhinji enhau. Nekudaro, vazhinji havazivi (kana kuti havanganzwisisi) kuti vezvenhau vangakwanise kuburitsa propaganda kana kunyengera zvinhu kutungamira nyika mukukuvara kwemari (yemunhuwo zvake) uye hurongwa hwekutonga hwenyika. .
Pfungwa yekuti vezvematongerwo enyika vanofanirwa kuita inofuratira chokwadi chekuti zvematongerwo enyika zvinotsigirwa zvakanyanya neanobhinda maindasitiri makuru. Iwo maindasitiri ayo anogadzira uye anogadzira mapurasitiki aya mumakungwa edu, semuenzaniso. Nekudaro, hatifanire kuvhiringidza zvinhu. Iyo inotarisisa mukuunzwa kwenyika yose kwemimwe mitero inovakirwa pane CO2 mumhepo uye kudziya kwepasirese. Zvinoratidzika kuti dambudziko repasi rese riri kuparadzirwa kusundira kuburikidza nemhinduro inopa nyangwe kutonga uye kutonga pamusoro pehuwandu. Icho chinoratidzika kuve icho chakavanzika chekupedzisira chinangwa.
Mushure mezvose, kuvandudzika kunogona kuitika chete kana zvinhu zvikanyanyisa. Kuziva dissonance kunoitika kana iwe ukataura kune vanhu kuti isu tinofanirwa kutanga taziva kana paine kunyatso kupisa kwemamiriro ekunze. Vanhu vakatosungwa munzira iyoyo yekutenda. Iwo rudzi rwe 'boka kufunga' kana kuramba kunyange kutora dambudziko kuzvidzidza. Kana zvangogamuchirwa, zvakaoma kupfuudza. Izvo zvinotadzisa vanhu vazhinji kungotarisisa nekutarisa mharidzo senge iri pazasi. Isu tinobheja kuti kana iwe ukatumira chinyorwa ichi kushamwari, ivo vanoramba kuona iwo mharidzo nekuzunza mapfudzi ako vobva vakudaidza iwe "mamiriro ekunze" kana "anorangana kufunga"? Unogona kuenzanisa izvo nezvawakaona muchechi kare. Vanhu vaingofungidzira zvakataurwa nemufundisi, nekuti aive akazvidzidzira. Kugwinyisa kunoshandira vanhu uye kwavo vatenda masisitimu Chero munhu anotsauka kubva muiyo tsika yekutenda anosekwa nehurema hunotaurwa nekereke iyoyo. (Tarisa mharidzo uye uverenge mberi pasi pevhidhiyo).
Vanhu ava havafi vakatarisa mharidzo iri pamusoro apa. Izvo zvinogona kukanganisa maitiro avo ekutenda uye haudi izvozvo. Mune psychology, icho chiitiko chinonzi "cognitive dissonance." Panguva ino, iyo yekutenda system yakasimbiswa neyezvino yemanzwiro kutamba kuburikidza Greta Thunberg. Mukadzi mudiki uyo asingauye nenyaya dzekupokana, asi anongotamba zvinonzwisa tsitsi zvevateereri pamanzwiro ekunzwa kwehuku, (nekuti hachizi chokwadi) kuti mamiriro ekunze ari kupisa zvekuti mhuka dzemhuka dziri kufa uye kuti wechidiki anga asisina ramangwana. Zvakare zvakareruka kwazvo kushandisa manhamba, saDavid Icke mukati iyi mharidzo zvinonyatsotsanangura. Asi yazvino yakatora nzira yayo yekutenda ye 'shanduko yemamiriro ekunze' haizodi uye haichatarise zviratidziro zvakadaro. Iwe haudi kuvhiringidzwa neaya akapusa zvokwadi, asi kungobatirira pane chinomisa icho chimwe chinhu chinofanira kuchinja. Kana ivo vanhu vamwe chete, 10 makore gare gare, vasina kuona shanduko, asi vane zviuru zvemadhora mashoma kushandisa pagore uye kusununguka kwakawanda kwakabviswa, ipapo pamwe kuzadziswa kuchauya pamberi, asi ipapo kunonoka.
Icho chokwadi chekuti pane yekutamba kwemanzwiro chaiko hazvina basa kune vanhu avo vari kuita yavo 'yekudziya kwepasirese' kana 'shanduko yemamiriro ekunze' system yekutenda. Kwete kunyange iwe ukaratidza kuti Sir David Attenborough uye timu yake mugadziri wemufirimu vakanyatsojekesa hunyengeri uye hunyengeri muNetflix zvinyorwa zvinyorwa 'Yedu Planet'. Kana 1 ichinyepa kubva pane izvo zvakateurwa, unogona kushamisika kuti yakawanda sei yakavezwa pamwechete kupa mufananidzo wenhema wechokwadi. Chero zvazvingaitika, zviri pachena kuti nyaya ye walrus plunging kubva kumawere nekuda kweiyo yakarasika polar ice yaive nhema pachena. Kana iwe ukatumira chinyorwa ichi kuvanhu vanokudaidza "mamiriro ekunze anoramba" kana "zano rekusangana", ivo vanogona kunetsekana zvakare kana kungotora zvirevo zvisina musoro zvakagadziriswa naAttenborough neNetflix mumashure. Chiitiko che'kutarisa chokwadi 'chakasvibiswa kuita chimwe chinhu zvekuti vakadzi vezera repakati-vasina hushamwari, mapapiro kurudyi, nyika, vanofunga zvekurangana havafunge wil tora. Uyezve, kutarisa chechinhu ikozvino chinhu chinoitwa nevatori venhau ne Facebook nyanzvi. Mubhangi anoongorora nyama yake. Kurongwa neiyo midhiya yakafanana kwaita basa rakanakisa!
Izvo hazvichisiri nezve chokwadi, asi nezve ngano kuburikidza nekuparadzira, kushandisa vanozivikanwa vatambi avo vanotamba zvakare pamanzwiro ehuku. Mufananidzo waHarrison Ford kubva kubasa rake remafirimu izvozvi wave kushandiswa kuita mutambo wakavimbika. Achangobva kushandiswa kushandisa iyo moto weAmazon senge nyowani emo booster mune kutaura kwaasina kunyora iye amene. Ehe mutambi anogona kutamba manzwiro acho! Iye mutambi weizvozvo. Isu tese tinoziva kuti iyo yeAmazon yakakosha kuti ibate CO2 (asi CO2 yakawanda inoita kuti iyoAmazon ikure), yayo bio-kusiana uye yemweya watinofema. Harrison Ford haafanire kutiudza izvozvo. Zvese zvataurwa naFord hapana chimwe kunze kweNeuro Linguistic Chirongwa chevateereri nemufananidzo uyo weAmazon "kupfuura kare ' iri kupisa. Ford anoda kuti unzwe kuti zvakamira sei kana mumba mako mune moto uye iye anotamba muteereri mauri zvakaperera pamoyo. Iye anotora mufananidzo kuti imba yedu yose iri 'pasi' pamoto uye kuti 1 ndeye 12. Nekudaro, kana iwe ukaverenga uchiona uye uchiona iyo vhidhiyo pazasi penyaya ino, iwe uchaona kuti masasi akaimbwa zvakare nemufananidzo wenhema wezvechokwadi kuburikidza neyekuparadzira midhiya. Semwana isu tinoziva kuti Sinterklaas haipo panguva yakapihwa, asi isu tichiri kuda kuramba vachipemberera.
Iye haatauri kuti kutaura kwaHarrison Ford nezveAmazon ichiri kumwe kuyedza kwekuparadzanisa iyo 'kurudyi-bapiro' razvino reblackjack yechimwe chinhu icho chaicho chiri pamusoro pezvinoreva nhema. Zvese zvekubatanidza kufunga kwakakomba kune chimwe chinhu cheicho chinonyatso tsoropodzwa brand (iyo ichakurumidza kupfupiswa nedambudziko, kuti ivo ndivo vanopara mhosva). Ford mutambi uye vatambi vanorehwa uye vanobhadharwa nekuda kwebasa ravo.
IyoAmazon haina kuziva imwe moto mu 2019 kupfuura mumakore apfuura uye izvo zvekuona zvinoshandiswa zvakanyorwa. Asi mubvunzo ndewekuti iwe unoda kutora dambudziko zvakare kuti ubaye vhidhiyo iyi kana kuti ungodzokera pachinyadzo che "Zvakanaka, ichocho chinofanira kuve chimwe chipfungwa chekufunga". Muchidimbu: mubvunzo ndewekuti iwe wakawira pasi pechirongwa che sublime (zvakare chinozivikanwa se 'kuparadzira') uye uri kumhanyisa mushure mekutaura kwenhema. Iwe unodemba kuzvibvunza iwe mubvunzo uyo kana kuti ungatoomerera kune yako system yekutenda? Wave chikamu cheyakanyatsogadziriswa polarization munharaunda uye kuti polarization nguva dzose inogadzira iripo (seyakawedzera uye minus matanda ebhatiri). Unogona kufungidzira kuti simba iri kuyerera riripi. Zano: Harrison Ford aive mumwe wevatauri ku 'World Government Summit'. Isu tiri kupupurira kumazera-mazhinji ekukura: Govana uye kutonga.
Greta Thunberg 'vanotsoropodza vanoita zvechisimba tsika dzisina kunaka kushaya vana-vasina hushamwari': kuguma kwechikonzero
Greta Thunberg UN kutaura kunotiyeuchidza kwe "vacheche vanokandwa kunze kwevanopinda" kutaura muIraq hondo
The maxim Problem, Reaction, Solution yakatsanangurwa
Tags: to, shanduko kuramba, mamiriro okunze, conspiracy, vanyengeri vanofunga, vanoramba, Featured, zvakabatana, zvepasi rose, Harisson Ford, mamiriro okunze, shanduko yemamiriro ekunze, vanoramba, kuramba, zvematongerwo enyika, zvakarurama, kurudyi, zvazvino, kudziya
Yasvika nguva yekuti titaure nezve njodzi hombe chaiyo panzvimbo yerudzi urwu rwekirabhu kana rome psyops. Izvo isu zvatisingatauri pakarepo zvimwe ndezvengozi huru yakananga kune vanhu nemasikirwo. Njodzi yechisikigo yakatimirira kana tikasaita chimwe chinhu nekukurumidza.
inotsanangudza kuderera kwehuwandu muEngland
Zvakashata iwe haugari pamusoro wenyaya
Inguva yatinotaura nezve njodzi chaidzo? sekureva kwako. Tenda kuti chinyorwa ichi naHeer Vrijland ndechimwe chezvinyorwa zvakakosha panguva ino, asi izvo parutivi.
Kana iwe ukaenda kuburikidza yake saiti zvishoma zvishoma, munyori akanyatso kukurukura zvakashata zve5G, ona iyi link, pamwe iwe wakarasikirwa nayo mister ex (PORVH :) iwe unogona, pano zvakare:
Chii chinonzi porvh?! Iyo iri pamusoro nekuti iyo n'anga inokanganisa chaunga nenyaya dzemamiriro ekunze uku ecology imwechete ichitambudzwa nezvombo zvinowanzoitika. Hapana chinokanganisa chinyorwa chino ..
Izvo zvinogara zvinoshanda kukanganisa vanhu kune imwe musoro, kuti iyo huropi munguva pfupi inokanganwa kukosha kwayo.
Izvo zvakakosha kuti uone kuti vanhu vanotamba sei.
povrh waimbove mutauri wapfuura, waifunga kuti wanga uri, hazvina kudaro, saka hazvina basa.
Chinyorwa chiri pamusoro ichi kubva kuHeer Vrijland chakakodzera zviitiko zvazvino, nekuti inonyatsotsanangudza kwatiri kuitiswa, yambiro yekunyevera.
Uye zvirokwazvo zvimiro zvewe zvakakoshawo asi zvinongova zvishandiso zvesimba izvo izvo
propaganda (zvakare zvakakosha)
Zvakanaka zvimwe hazvizo rangarirwe, nekuti pfungwa yekudzora iri kukura nemasikati uye ipapo hura hwedu hunenge hwatove mugore.
Uye 5G uye Elon Musk Neuraling uropi-kombiyuta interface inoita basa rakakosha ipapo.
Panguva ino, vadzidzi vese avo vari kumhanya 4G / 5G mobile selfies
SaTsunami, meseji iri kugara ichiuya kumunhu wese,
UN, rubs mukati, inodzvinyirira uye ichaita kuti ipinirwe pasi pehuro yako.
Zvekare nhasi 1 Oct mushure mekusemesa Greta (kushungurudzwa kwevana) kunoitika panguva yeUN
(uye zvechokwadi kwave kuchinjana kwemamiriro ekunze kwemakumi emakore, ichi ichokwadiwo)
Kuparadzira kunofanirwa kuramba kuchidzokororwa.
Iyo mharidzo iri muchinyorwa inoratidza mashandisiro anoita IPCC data.
Chete vanhu vazhinji havatore dambudziko kuti vazvione.
Isu tine nguva yekutarisisa yeinonyanya 8 masekondi
Brilliant !!! tiri kuenda kunodya vana kuchengetedza mamiriro ekunze!
Musikana: “Denga riri kudonha mumwedzi mishoma. "Tinofanirwa kudya makanda."
AOC: “Ehe, aiwa, saka zvakanaka. Asi isu tine anopfuura mwedzi mishoma. "
Mumwe mutambi akabhadharwa kwazvo uyo anosimudzira "kubatana kwepasi rose" uye saka piramidhi gesture kumagumo kwekutaura inoratidza script yaLuciferian.
Hapana munhu anoda kusvibiswa. Wese munhu anoda puraneti ine hutano, asi ivo vanopaza vari pamusoro pemakambani uye vanhu vanofanirwa kubhadhara. Mazhinji emifananidzo yekusvibisa anongova mafirimu zvigadzirwa. Izvo zviri zvese nezve Dambudziko, Reaction, Solution.
Fleur akanyora kuti:
Ini ndinofunga kuti pasi rose mamiriro ekunze isangano remadhemical. Masayendisiti ane chiratidzo chakasiyana, saka, avo vasingateveri chinamato chemamiriro emombe makuru, vanongotyisidzirwa ...
Unorwara sei iwe uchichida neiyo kudziya kwemamiriro ekunze ekunamata ...!
Iyo Great Global Inopisa Swindle [NL Subs]
Kune masayendisiti anopesana nekuyerera uye anoratidza kuti nyika haizopisa kubva ku2020 asi ichadziya zvakanyanya.
Tiri kutarisira mini yemazaya echando ...
Kunyangwe NASA inofanotaura kutonhora kwakasimba kwepasi.
Zvisikwa, iro rine simba zuva rinodzosera shure nekuparadza manyepo eIPCC mumakore anouya nekutonhora kwakasimba kwepasi .... great!
Kuti irege kunyengedzwa zvachose, IPCC ikozvino yakavanzika nekuita shoma asi yakakosha shanduko kune yavo mushumo.
Denderedzwa ndedzedzese nguva uye dzinoitika kwese kwese mune zvisikwa uye mune zvehupfumi mhando, kutonhora kwekushisa kuri pano pasi kunofambidzana nebasa rezuva (Sun banga index). Enda unotsanangura avhareji hysteric mamiriro ekunze. Isu tiri kunyatsosvika kune iyo inonzi Dalton minim (2020) ichiteverwa nehuwandu hweMaunder (diki yechando yechando), izvi zvakaitika kare muzana ramakore re18. Iyo nzira inozvidzokorora pachayo seyakasikwa kutenderera inofanirwa kuzvibata. Ehe unogona zvakare kuzviona mumamodeli ayo ikozvino anoshandiswa nekirabhu yeanometi adome, ayo asinga pfuure kumashure kupfuura 1850 ..
Pane chakavanzika chinangwa chekusimudzira mamiriro ekunze epasi rose uye kuderedzwa kwevanhu.
« Greta Thunberg 'vanotsoropodza vanoita zvechisimba tsika dzisina kunaka kushaya vana-vasina hushamwari': kuguma kwechikonzero
Iyo mhando 'kurudyi' uye nenzira yakanyatsorongwa yekushambadzira zano rekunyomba »
Total Visits: 12.985.989
Turkish inotsamwisa Syria harbinger yeEurope
Martin Vrijland op Ruinerwold Drenthe nemhuri yake, inotevera kushanda kwepfungwa (PsyOp) vakananga kune mamwe mapurisa ehurumende
Martin Vrijland op Turkish inotsamwisa Syria harbinger yeEurope
ongorora op Turkish inotsamwisa Syria harbinger yeEurope
SalmonInClick op Varimi vanoratidzira: varimi vanoteerera kuti vatungamiriri vekuratidzira havasi vashandi vehurumende